Ulwimi luxhobo esinxibelelwano esisenza sibe ngabantu.
Ulwimi-ngakumbi ngakumbi ulwimi loluntu-lubhekisela kwigrama kunye neminye imithetho kunye nemigangatho evumela abantu ukuba bakhulume kunye nevakala ngendlela abanye abangayiqonda ngayo, uthi umlimi uJohn McWhorter, uprofesa onxulumene nesiNgesi kunye noononophelo kwi-University of Columbia. Okanye njengoGuy Deutscher uthe kumsebenzi wakhe wokuzala, "Ukuqhutyelwa kweelwimi: Uhambo lweNdlu yoLuntu lweNtshukumo enkulu kunazo zonke," ulwimi "lusenza sibe ngabantu." Ukufumanisa oko kuthethwa ngolwimi, ngoko, kufuna ukujonga ngokufutshane imvelaphi yayo, ukuguqulwa kwayo kwiinkulungwane, kunye nendima yayo ebalulekileyo ekukholeni kwabantu nokuziphendukela kwemvelo.
Eyona nto inkulu
Ukuba ulwimi lolona lukhulu luluntu, lugqithise kakhulu ukuba kwakungekho nto eyakhayo. Enyanisweni, iDeutscher kunye noMcWhorter, ezimbini zeelwimi ezidumileyo zehlabathi, zithi imvelaphi yolwimi ihlala ingummangaliso namhlanje njengoko kwakunjalo kumaxesha eBhayibhile.
Akukho mntu, utshilo uDeutscher, ufikelele ngcaciso engcono kunomxholo weNqaba yeBabel , enye yeendaba ezibuhlungu kunye neyona nto ibalulekileyo kwiBhayibhile. Kwintsimilelo yeBhayibhile, ukubona uThixo ukuba abantu behlabathi babe nezakhono ekwakheni kwaye banqwenela ukwakha inqaba yokukhonza izithixo, ngokwenene isixeko esithile, eMesopotamiya yasendulo eselulele emazulwini-ingenelela uluntu ngolwimi oluninzi lweelwimi ukuze bangakwazi ukuthetha, kwaye bebengenakukwazi ukwakha idilesi enkulu eyokutshintsha indawo yamandla onke.
Ukuba le ngxelo ayikho i-apocryphal, intsingiselo yayo ayikho, njengoko amanqaku kaDeutscher:
"Ulwimi lubonakala lubonakala ngokucokisekileyo ukuba umntu akanakucinga nje njengento enye ngaphandle kwemisebenzi eyenziwe ngumenzi wengcweti. Ngayiphi enye into eyenza ukuba isi sixhobo senze okungaphezulu kweyesithathu? - I, f, b, sh, sh, e, k, g, sh, e, e kunye ne-njalo-isilinganisi esingaphezu kwezinto ezimbalwa ezingabonakaliyo, i-splutters, izandi ezingenangqiqo ezingenanto, akukho ukukwazi ukubonisa, akukho amandla okuchaza. "
Kodwa, ukuba uqhuba ezi zandi "ngeengcingo kunye namavili omatshini wolwimi," kutsho uDeutscher, bahlele ngendlela ethile ekhethekileyo kwaye bachaze indlela abayalelwe ngayo ngemigaqo yograma , ngokukhawuleza unalo ulwimi, into epheleleyo iqela abantu bayayiqonda kwaye basebenzise ukuthetha-kwaye ngokwenene ukuba basebenze kunye noluntu olulungileyo.
Ukuba imvelaphi engummangaliso yolwimi ingabonakali lula kwintsi ngiselo yayo, kunokunceda ukubuyela kwiindawo ezidumeleyo kuluntu lwaseNtshona-kunye nongquzulwano: Noam Chomsky. I-Chomsky idume ngokugqithiseleyo ukuba yonke ingaphantsi kweelwimi (ukufundwa kolwimi) kuye kwathiwa emva kwayo. I-Chomskyian linguistics iyigama elibanzi kwimigaqo yolwimi kunye neendlela zokufunda iilwimi ezisetyenzisiweyo kunye / okanye zipapashwa yiChomsky ekusebenzeni okunjalo njenge-"Structures Structures" (1957) kunye ne "Imiba ye-Theory of Syntax" (1965).
Kodwa, mhlawumbi umsebenzi ogqithiseleyo kaChomsky kwingxoxo ngolwimi ngowama-1976 iphepha, "Kwimeko Yolwimi." Kulo, iChomsky ijongene ngqo nenjongo yolwimi ngendlela efanekisela ukugqitywa kweDeschercher kunye noMcWhorter.
"Ubume bolwimi lubhekwa njengomsebenzi wolwazi olwenziwe ... [T] ubuchule bakhe beelwimi bungabonwa njengomsebenzi osisigxina, udidi lweentlobo, enye icandelo yengqondo yomntu, umsebenzi obala maphulo ngamava ngegrama. "U
Ngamanye amagama, ulwimi lusexeshana kunye nesixhobo esichaza indlela esidibana ngayo nehlabathi, komnye nomnye, kwaye kuthi, nakwabanye. Ulwimi, njengoko kuphawulwe, luyinto esenza sibe ngabantu.
Umlobi waseMelika kunye no-existentialist, uWalt Whitman, uthe ulwimi luyingqikithi yazo zonke izinto abantu abazenzayo njengezilwanyana:
"Ulwimi aluyilo lwakhiwo olungabonakaliyo lwabafundi, okanye abenzi bezenzi-magama, kodwa into ephuma kumsebenzi, iimfuno, izibophelelo, uvuyo, ukuthandwa, ukuthanda, izizukulwana ezide zabantu, kwaye iziseko zayo zibanzi kwaye ziphantsi, e mhlabeni. "
Ulwimi, ngoko ke, sisisonke sawo onke amava abantu ukususela ekuqaleni komntu. Ngaphandle kolwimi, abantu abanakukwazi ukuveza iimvakalelo zabo, iingcamango, iimvakalelo, iiminqweno kunye neenkolelo. Ngaphandle kolwimi, bekungekho nantwini kwaye mhlawumbi akukho nkolo.
Nangona ulaka lukaThixo ekwakhiweni kweNqaba yeBabel lwakhokelela kwiilwimi ezininzi kwihlabathi lonke, inyaniso kukuba iilwimi, iilwimi ezinokuthi zitshintshwe, zifundwe, ziguqulelwe, zibhaliwe, ziboniswe.
Njengoko iikhomputha zixubusha nabantu-kwaye kunye nomnye-intsingiselo yolwimi ingatshintsha ngokukhawuleza. Iikhomputha "zithetha" ngokusebenzisa ulwimi lwenkqubo . Njengolwimi loluntu, ulwimi lwekhompyutheni yinkqubo yegrama, i-syntax kunye neminye imithetho evumela abantu ukuba bathethe ii-PC zabo, iipilisi kunye ne-smartphones, kodwa kwakhona ivumela iikhomputha ukuba zixubane nezinye iikhomputha.
Njengengqiqo yolwazi iqhubela phambili ukuya kwindawo apho ikhompyutha ziyakwazi ukunxibelelanisana ngaphandle kokungenelela kwabantu, kanye nencazelo yolwimi ingadinga ukuguquka kwakhona. Ulwimi luya kuba luhlala luhlala lusenza sibe ngabantu, kodwa luya kuba sisixhobo esivumela ukuba oomatshini bakwazi ukuthetha, ukuchaza iimfuno kunye nokufunwa, ukukhupha izikhokelo, ukudala, nokuvelisa ngolwimi lwabo. Ulwimi, ngoko ke, luya kuba yinto eyayiveliswa ngabantu kodwa ke iguquke kwinkqubo entsha yokunxibelelana-enokungabikho nxu lumano kubantu.
Uluhlu lwamaGrike lwangaphambili